N'elu 3 Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > N'elu 3 Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London
N'elu 3 Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London
site Nikki Gabriel
Zụlite njem Britain, Ụgbọ oloko njem UK, Njem Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 22/11/2021)
U.K. isi obodo na-enye ọtụtụ ihe ụtọ maka ndị njem na ndị obodo. Site na Big Ben na London Eye ruo Westminster Abbey na Buckingham Obí – enwere ọtụtụ ebe ị ga-eleta na London. E nwekwara ihe owuwu ihe owuwu, sprightly abalị ndụ, na nri dị ụtọ. Otú ọ dị, Ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-echefukarị bụ na Lọndọn bụkwa nnukwu nkume n'ọtụtụ njem ụgbọ okporo ígwè njem ebe aga na U.K. na Europe.
Ma ịchọrọ ịgbanarị ihu igwe na-adịghị mma nke London wee nweta anyanwụ ma ọ bụ na-emikpu onwe gị na akụkọ ihe mere eme., Ị ga-ahụ ọtụtụ ebe na gburugburu London. Ihe kachasị mma bụ na ị gaghị alụ ọgụ ogologo ahịrị nlele nche na ọdụ ụgbọ elu. Kama, ị nwere ike họrọ ebe ị na-aga wee banye ụgbọ oloko site na otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri dị na London. Ebe a na- 3 Ebe njem ụgbọ oloko kacha mma si London.
Okporo ígwè Transport bụ The Eco-Enyi na Enyi Way To Travel. Isiokwu a na-e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Nke Weebụsaịtị ị ga-eji ụgbọ oloko dị ọnụ ala N'ụwa.
Amụma Anwansị nke Ụgbọ oloko
Ma ị na-eleta London ụbọchị ole na ole ma ọ bụ nọrọ n'ime obodo ahụ ogologo oge ị nwere ike icheta, na-ewere a ụgbọ okporo ígwè nwere ike ịgbanwe echiche gị gbasara obodo ahụ. N'ofè obodo mepere emepe embodiment, London gbara ndị ọbịa gburugburu obodo mara mma, obodo mahadum, osimiri, na akụkọ ihe mere eme na obodo nta.
Ebe ndị a niile na-adị mfe iji ụgbọ oloko si London nweta, na agaghị ewe gị ihe karịrị awa ole na ole iji ruo. Ịnya ụgbọ oloko si London bụ otu n'ime ahụmịhe Bekee kacha quintessential ị ga-agba akaebe.
Mana akụkụ kachasị mma banyere njem ụgbọ oloko ndị a si London abụghị ebe a na-aga. Njem ahụ na-ewe otu awa na-eme ka ị hụpere ọmarịcha ime obodo Europe nke jupụtara na nnukwu ụlọ, isi iyi mmiri ọhụrụ, na ugwu ugwu.
Ya mere, na-enweghị ihe ọzọ mmasị, ka anyị leba anya na nhọrọ anyị maka ebe njem ụgbọ oloko kacha mma si London.
1. Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London: Brighton
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ị ga njem ụgbọ oloko si London, Brighton nwere ike ịbụ ebe mbụ ga-abata gị n'uche. Na-egosi oke osimiri dị n'okirikiri pristine, hip cafes, plush ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na okporo ámá ndị na-efegharị efegharị, Brighton na-enye ezumike nnabata site na ndụ ime obodo ọgba aghara.
Ọzọkwa, Obodo mara mma nke dị n'akụkụ oke osimiri bụ ebe obibi nke ọmarịcha Royal Pavilion, a 200-afọ obí nke bụ otu oge okpomọkụ nlaghachi azụ nke Prince nke Wales. A maara nke ọma dị ka "isi obodo mmekọ nwoke na nwanyị nke U.K", Brighton bụkwa ebe obibi nke ọmarịcha ụlọ mmanya na-eme enyi na ihe omume mmekọ nwoke na nwanyị dị ịrịba ama kwa afọ..
Mgbe tetara elu na-ekpo ọkụ anyanwụ ụzarị, Ịga n'okporo ụzọ Brighton na-adịghị mma ga-eme ka ị chọpụta akụkụ ọhụrụ nke obodo ahụ. Ụzọ ndị ahụ dị warara jupụtara na ụlọ ahịa ihe ncheta vine, ụlọ ahịa ndekọ vinyl, na ụlọ ngosi nka na-adọrọ adọrọ.
Echefula ịkwụsị maka otu iko kọfị n'otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-atọ ụtọ na-etinye n'okporo ámá ndị a. Ma ọ bụ ị nwere ike ịnụ ụtọ pint na-enye ume ọhụrụ n'otu n'ime ubi biya. Ọzọkwa, lezie anya maka ụfọdụ ụdị ndụ kacha mma nke ihe owuwu nke narị afọ nke 16.
Ebe nkiri ndị ọzọ na Brighton gụnyere Preston Park Rockery, nke bụ ogige nkume kachasị na U.K, yana ọmarịcha Brighton Palace Pier. Ọ bụ ihe dị ukwuu maka ọgwụgwọ solo njem dị ka ọ dị maka ezinụlọ.
Ma ị na-achọ njem ụbọchị ngwa ngwa ma ọ bụ izu ike ngwụcha izu ụka si London, Brighton bụ ezigbo nhọrọ. Echefula ịgụkwu gbasara ya ihe kacha mma ime na Brighton, U.K., maka izu ụka mgbe ị na-eme atụmatụ njem njem gị.
Site na ụgbọ oloko na-eru Brighton
Ihe dị mma gbasara Brighton bụ na ị nwere ike isi na London rute obodo n'ime ihe dị ka otu elekere. Ụgbọ oloko na-aga Brighton na-apụ ọ bụla 10 nkeji si dị iche iche ọdụ, gụnyere London Victoria ọdụ na London St. Pancras ojii.
Jiri ụgbọ oloko gaa Amsterdam na London
Jiri ụgbọ oloko si Paris gaa London
Berlin jiri ụgbọ oloko gaa London
Brussels na London jiri ụgbọ oloko
2. Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London: Stonehenge na Salisbury
Na ya ochie castles na ulo eze, U.K enweghị oke mmasị maka ndị na-agụ akụkọ ihe mere eme. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ahụmahụ mbụ nke ikiri ibe akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dị ndụ, nleta Stonehenge kwesịrị.
Ihe owuwu nkume prehistoric dị egwu, kwenyere na ọ bụ karịa 5,000 afọ, ka na-agbagwojukwa ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị ọkà mmụta ihe ochie anya. Ndị ọbịa enweghị ike ịchebe ka ndị na-ewu ụlọ siri were dọkpụrụ nnukwu nkume ndị ahụ n'ebe ha nọ ugbu a..
Ọ dị obere karịa 10 kilomita site na Salisbury, Stonehenge bụ ụgbọ oloko ga-ewe nkeji 90 pụọ na U.K. isi obodo. Ị ga-ahụ ọtụtụ ụgbọ ala na tagzi na ọdụ Salisbury ga-akpọrọ gị gaa na saịtị tupu akụkọ ihe mere eme.
Mgbe ị nọ ebe ahụ, echefula inyocha ihe nkiri ndị ọzọ nke mpaghara ahụ ga-enye. Ndị a gụnyere okirikiri osisi Woodhenge na ihe fọdụrụ na mgbidi Durrington dị omimi..
Ọzọkwa, ọ dị mma ịnọrọ obere oge n'obodo Salisbury nwere akụkọ ihe mere eme. Gaa na Katidral Salisbury nke narị afọ nke 13 wee gagharịa na Katidral dị nso maka ịhụtụ Elizabethan na Victoria. ụkpụrụ ụlọ ebube. Anọla n'ịzụ ahịa ahịa na Market Square tupu i dozie maka otu pint biya na cafe mara mma..
Site na ụgbọ oloko na-erute Stonehenge
Were ụgbọ oloko gaa Salisbury site na ọdụ ụgbọ mmiri London Waterloo. Ozugbo ị rutere ọdụ Salisbury, banye na tagzi ma ọ bụ bọs nkeonwe iji ruo Stonehenge. Jide n'aka na ị debere njem nlegharị anya Stonehenge n'ihu.
3. Ebe kacha mma ụgbọ oloko si London: Cotswolds
Ị maara na ebe kwesịrị ịga leta mgbe ahọpụtara ya ka ọ bụrụ mpaghara mara mma.. Ya na ahịhịa ndụ ugwu ugwu, manicured ifuru ubi, ụlọ mmanụ aṅụ-nkume, na ụlọ ndị na-adịghị mma, Cotswolds bụ ihe onyonyo a ma ama nke obodo bekee ị nwere ike ịhụ na fim.
Cotswolds bụ otu n'ime ebe ị na-achọghị ime ọtụtụ ihe maka njem ezumike na London.. Ebe nkiri ama ama na mpaghara gụnyere Broadway Tower, Burton-na-mmiri, N’agha, na Sudeley Castle.
Site na ụgbọ oloko na-eru Cotswolds
Mpaghara Cotswolds bụ ọdụ ụgbọ oloko cornucopia gbara ya gburugburu, gụnyere Banbury, Bath, Cheltenham, na Morten-in-Marsh. Ụzọ kacha mma iji ruo Cotswolds si London bụ iji ụgbọ oloko si London Paddington gaa Morten-in-Marsh.. Ịnya ụgbọ oloko nke nkeji 90 na-enye gị ụgwọ ọrụ breathtaking echiche nke obodo bekee.
Oge ọzọ ị ga-ahụ onwe gị na-agụsi gị agụụ ike ezumike na-atụrụ ndụ, egbula oge dị ukwuu nhazi. Kama, banye n'ụgbọ okporo ígwè site na ọdụ London ọ bụla wee gbaga n'otu n'ime ebe ndị a na-ese foto zuru oke na U.K.
Anyị na Chekwa ụgbọ oloko ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem na Top ndị a 3 Ebe njem kacha mma si London.
You chọrọ Embed anyị blog post “Top 3 Ebe njem ụgbọ oloko kacha mma si London” banye na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, na ị nwere ike ịgbanwe / es na / fr ma ọ bụ / de na ọtụtụ asụsụ.
BestTripDestinations	London	Train Travel	ụgbọ okporo ígwè njem	TrainTripLondon
Onye njem nwa oge na onye nyocha nke na-enwe mmasị ịkekọrịta ahụmịhe ya n'ihe odide ya. Ekwenyere m n'ikwupụta echiche m nke ọma na iguzo n'akụkụ omume m - Ị nwere ike pịa ebe a iji Kpọtụrụ Rebecca
Njem ụgbọ oloko, Ụgbọ okporo ígwè njem Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Zụọnụ njem Czech Republic, Ụgbọ oloko njem France, Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Ụgbọ okporo ígwè njem Hungary, Inzọ Njem Italytali, Zụlite njem Netherlands, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
10 Days njegasi Na Bavaria Germany
Njem ụgbọ oloko, Inzọ Njem Germany, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
6 Thrifty Atụmatụ Mgbe Train ejegharị Na Europe
Inzọ Njem Italytali, Zụọnụ Ndụmọdụ, Njem Europe
10 Ụzọ okike iji mee njem
10 Ebe agbamakwụkwọ dị ịtụnanya na Europe
10 Ụzọ iji depụta ihe ncheta njem
12 Ebe mmalite kacha elu n'ụwa niile
3 Ụzọ kacha mma iji mee Everest Base Camp
Nwebiisinka © 2021 - Chekwa ụgbọ oloko, Amsterdam, Netherlands